FAQ Metal Precision - ZHONGHUI INTELLIGENT MANUFACTURING (JINAN) GROUP CO., LTD
1. Inona no atao hoe precision machining?
Precision Machining dia dingana iray hanesorana fitaovana amin'ny workpiece iray mandritra ny fihazonana ny fandeferana akaiky.Ny milina mazava tsara dia manana karazany maro, ao anatin'izany ny fikosoham-bary, ny fihodinana ary ny fanodinana elektrika.Ny milina fandrefesana amin'izao fotoana izao dia fehezin'ny Computer Numerical Controls (CNC).
Saika ny vokatra metaly rehetra dia mampiasa machining mazava tsara, toy ny fitaovana maro hafa toy ny plastika sy hazo.Ireo milina ireo dia miasa amin'ny masinina manokana sy voaofana.Mba hahavitan'ny fitaovana fanapahana ny asany, dia tsy maintsy ahetsiketsika amin'ny lalana voatondro izy io mba hanaovana ny fanapahana marina.Ity hetsika voalohany ity dia antsoina hoe "haingam-pandeha."Ny workpiece dia azo afindra ihany koa, fantatra amin'ny anarana hoe hetsika faharoa amin'ny "feed."Miaraka, ireo fihetsika ireo sy ny hamafin'ny fitaovana fanapahana dia ahafahan'ny milina marim-pototra miasa.
Ny machining precision kalitao dia mitaky ny fahaizana manaraka ny drafi-drafitra manokana namboarin'ny CAD (computer aided design) na CAM (computer aided manufacturing) fandaharana toy ny AutoCAD sy TurboCAD.Ny lozisialy dia afaka manampy amin'ny famokarana ireo kisarisary saro-pady 3 dimensionina na drafitra ilaina mba hanamboarana fitaovana, milina na zavatra.Ireo drafitra ireo dia tsy maintsy arahana amin'ny antsipiriany lehibe mba hahazoana antoka fa mitazona ny fahamendrehany ny vokatra iray.Na dia miasa miaraka amin'ny karazana programa CAD/CAM aza ny ankamaroan'ny orinasa mpanao masinina mazava tsara, dia mbola miasa matetika amin'ny sketsa vita tanana izy ireo amin'ny dingana voalohany amin'ny famolavolana.
Ny machining precision dia ampiasaina amin'ny fitaovana maromaro ao anatin'izany ny vy, varahina, graphite, fitaratra ary plastika raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy.Miankina amin'ny haben'ny tetik'asa sy ny fitaovana hampiasaina, ny fitaovana fandrefesana mazava tsara no hampiasaina.Ny fitambaran'ny lathes, milina fitotoana, milina fandavahana, tsofa sy fikosoham-bary, ary na robotika haingam-pandeha aza dia azo ampiasaina.Ny indostrian'ny aerospace dia mety mampiasa milina haingam-pandeha, raha toa kosa ny indostrian'ny fanamboarana kitay hazo dia mety mampiasa ny etching sy ny fikosoham-bary.Ny fikoropahana amin'ny hazakazaka iray, na ny habetsahan'ny zavatra iray manokana, dia mety hahatratra an'arivony, na ho vitsivitsy monja.Ny machining precision matetika dia mitaky ny fandaharana amin'ny fitaovana CNC izay midika fa ny ordinatera no mifehy azy ireo.Ny fitaovana CNC dia mamela ny refy marina arahina mandritra ny fandehan'ny vokatra iray.
2. Inona no atao hoe fikosoham-bary?
Ny fikosoham-bary dia ny dingan'ny machining amin'ny fampiasana mpanapaka rotary hanesorana ny fitaovana amin'ny workpiece amin'ny alàlan'ny fandrosoan'ny (na famahanana) ny mpanapaka ho any amin'ny workpiece amin'ny lalana iray.Ny mpanapaka dia azo atao amin'ny zoro mifandraika amin'ny famaky ny fitaovana.Ny fikosoham-bary dia mandrakotra karazana asa sy milina isan-karazany, amin'ny mizana manomboka amin'ny ampahany kely ka hatramin'ny asa fikosoham-bary lehibe sy mavesatra.Iray amin'ireo dingana fampiasa matetika indrindra amin'ny fanamboarana kojakoja fanao amin'ny fandeferana marina izy io.
Ny fikosoham-bary dia azo atao amin'ny fitaovana milina isan-karazany.Ny kilasin'ny milina fikosoham-bary tany am-boalohany dia ny milina fitotoana (matetika antsoina hoe fikosoham-bary).Taorian'ny fahatongavan'ny ordinateur numerical control (CNC), ny milina fitotoana dia nivoatra ho ivon'ny machining: milina fitotoana nampitomboin'ny mpanova fitaovana mandeha ho azy, gazetiboky fitaovana na carousels, fahaiza-manaon'ny CNC, rafitra coolant, ary trano.Ny foibe fikosoham-bary amin'ny ankapobeny dia sokajiana ho ivon'ny milina mitsangana (VMC) na ivon-toeran'ny milina marindrano (HMCs).
Ny fampidirana ny fikosoham-bary amin'ny tontolo mihodina, ary ny mifamadika amin'izany, dia natomboka tamin'ny fitaovana mivantana ho an'ny lathes sy ny fampiasana tsindraindray ny fikosoham-bary ho an'ny asa fanodinana.Izany dia nitarika ho amin'ny kilasy vaovao amin'ny fitaovana milina, multitasking machines (MTMs), izay natao hanamora ny fitotoana sy ny fihodinana ao anatin'ny valopy asa iray ihany.
3. Inona no atao hoe precision CNC machining?
Ho an'ny injeniera famolavolana, ekipa R&D ary mpanamboatra izay miankina amin'ny famokarana ampahany, ny milina CNC precision dia mamela ny famoronana ampahany sarotra tsy misy fanodinana fanampiny.Raha ny marina, ny machining CNC precision matetika dia mahatonga ny ampahany vita amin'ny milina tokana.
Ny dingan'ny machining dia manaisotra fitaovana ary mampiasa fitaovana manapaka isan-karazany mba hamoronana ny famolavolana farany, ary matetika sarotra be.Ny haavon'ny fahitsiana dia ampitomboina amin'ny alàlan'ny fampiasana ordinatera nomerika (CNC), izay ampiasaina amin'ny automatique ny fanaraha-maso ny fitaovana machining.
Ny anjara asan'ny "CNC" amin'ny machining mazava tsara
Amin'ny fampiasana toromarika fandaharana misy kaody, ny machining CNC precision dia ahafahan'ny workpiece iray ho tapaka sy amboarina amin'ny fepetra tsy misy fitsabahana amin'ny tanana ataon'ny mpandraharaha milina.
Maka modely amin'ny famolavolana informatika (CAD) nomen'ny mpanjifa iray, ny masinina manam-pahaizana iray dia mampiasa rindrambaiko fanamboarana informatika (CAM) mba hamoronana ny toromarika amin'ny fanamboarana ny ampahany.Miorina amin'ny maodely CAD, ny lozisialy dia mamaritra izay lalan'ny fitaovana ilaina ary mamorona ny code programme izay milaza ny milina:
■ Inona ny RPM marina sy ny tahan'ny sakafo
■ Rahoviana ary aiza no hamindra ny fitaovana sy/na ny asa
■ Ny halalin'ny fanapahana
■ Rahoviana no hampiharana coolant
■ Ny anton-javatra hafa rehetra mifandraika amin'ny hafainganam-pandeha, ny tahan'ny sakafo ary ny fandrindrana
Ny mpanara-maso CNC avy eo dia mampiasa ny kaody fandaharana mba hifehezana, hanara-maso ary hanara-maso ny fihetsiky ny milina.
Amin'izao fotoana izao, ny CNC dia singa natsangana amin'ny fitaovana isan-karazany, avy amin'ny lathes, fikosoham-bary, ary ny router ka hatramin'ny tariby EDM (machining elektrika), laser, ary milina fanapahana plasma.Ho fanampin'ny automating ny fizotran'ny machining sy ny fanatsarana ny fahitsiana, ny CNC dia manafoana ny asa tanana ary manafaka ny masinina mba hanara-maso ireo milina mandeha amin'ny fotoana iray.
Fanampin'izany, rehefa vita ny lalan'ny fitaovana iray ary voarindra ny milina iray, dia afaka mandeha imbetsaka izy io.Izany dia manome ny haavon'ny fahitsiana sy ny fiverimberenan'ny, izay kosa mahatonga ny dingana ho tena lafo vidy sy scalable.
Fitaovana vita amin'ny milina
Ny metaly sasany izay matetika atao milina dia ahitana aliminioma, varahina, varahina, varahina, vy, titane, ary zinc.Ankoatr'izay, ny hazo, ny foam, ny fiberglass, ary ny plastika toy ny polypropylène dia azo atao koa.
Raha ny marina, ny momba ny fitaovana rehetra dia azo ampiasaina amin'ny machining CNC mazava tsara - mazava ho azy, miankina amin'ny fampiharana sy ny fepetra takiana.
Ny tombony sasany amin'ny machining CNC precision
Ho an'ny ankamaroan'ny ampahany kely sy ny singa ampiasaina amin'ny vokatra vita amin'ny vokatra, ny fametahana CNC machining dia matetika ny fomba fanamboarana safidy.
Toy ny saika ny fomba fanapahana sy machining rehetra, ny fitaovana samihafa dia samy hafa ny fitondran-tena, ary ny habeny sy ny endriky ny singa iray dia misy fiantraikany lehibe amin'ny dingana.Na izany aza, amin'ny ankapobeny ny dingan'ny fametrahana mazava tsara CNC machining dia manome tombony amin'ny fomba machining hafa.
Izany dia satria ny machining CNC dia afaka manolotra:
■ Ny haavon'ny ampahany be pitsiny
■ Fandeferana henjana, matetika manomboka amin'ny ±0.0002" (±0.00508 mm) hatramin'ny ±0.0005" (±0.0127 mm)
■ Fanamboarana eny ambonin'ny tany malama tsara, ao anatin'izany ny fanamboaran-javatra mahazatra
■ Famerenana, na dia amin'ny feo avo aza
Na dia afaka mampiasa lathe manual aza ny masinina mahay mba hanaovana ampahany tsara amin'ny fatra 10 na 100, inona no mitranga rehefa mila kojakoja 1000 ianao?ampahany 10.000?100.000 sa ampahany iray tapitrisa?
Miaraka amin'ny machining CNC precision, azonao atao ny mahazo ny scalability sy ny hafainganam-pandeha ilaina amin'ity karazana famokarana avo lenta ity.Ho fanampin'izany, ny famerenana avo lenta amin'ny machining CNC precision dia manome anao ampahany mitovy hatrany hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany, na firy na firy ny ampahany vokarinao.
4. Ahoana no fanaovana azy: inona ny dingana sy ny fitaovana ampiasaina matetika amin'ny machining mazava tsara?
Misy fomba sasany tena manokana ny CNC machining, anisan'izany ny tariby EDM (electrical discharge machining), additive machining, ary 3D tamin'ny laser fanontam-pirinty.Ohatra, ny tariby EDM dia mampiasa fitaovana enti-mitondra - matetika metaly -- sy fivoahana elektrônika mba hanimba zavatra iray ho lasa endrika saro-takarina.
Na izany aza, eto isika dia hifantoka amin'ny fikosoham-bary sy ny fihodinana dingana - roa subtractive fomba izay be mpampiasa sy matetika ampiasaina ho an'ny mazava tsara CNC machining.
Milling vs. mivadika
Ny fikosoham-bary dia dingan'ny machining izay mampiasa fitaovana fanodinana cylindrical mba hanesorana ny fitaovana sy hamorona endrika.Ny fitaovana fikosoham-bary, fantatra amin'ny anarana hoe fikosoham-bary na foiben'ny machining, dia mahavita tontolon'ny géométika ampahany sarotra amin'ny sasany amin'ireo zavatra lehibe indrindra vita amin'ny metaly.
Ny toetra manan-danja amin'ny fikosoham-bary dia ny fijanonan'ny workpiece rehefa mihodina ny fitaovana fanapahana.Amin'ny teny hafa, eo amin'ny fikosoham-bary, ny fitaovana fanapahana mihodina dia mihodina manodidina ny workpiece, izay mijanona amin'ny toerany eo amin'ny fandriana.
Ny fanodinkodinana dia ny dingan'ny fanapahana na ny fandrafetana fitaovana iray amin'ny fitaovana antsoina hoe lathe.Amin'ny ankapobeny, ny lathe dia manodina ny workpiece amin'ny axis mitsangana na mitsivalana raha misy fitaovana fanapahana raikitra (izay mety na tsy mihodina) mandeha amin'ny axe efa nomanina.
Tsy afaka mandeha ara-batana ny fitaovana.Mihodina ny fitaovana, mamela ny fitaovana hanatanteraka ny asa voarindra.(Misy ampahany amin'ny lathes izay mihodina manodidina ny tariby misy spool ny fitaovana, saingy tsy voaresaka eto izany.)
Amin'ny fihodinana, tsy toy ny fikosoham-bary, ny workpiece dia mihodina.Ny tahirim-pamokarana dia mihodina amin'ny spindle an'ny lathe ary ny fitaovana fanapahana dia mifandray amin'ny workpiece.
Na dia misy amin'ny maodely manual aza ny milina sy ny lathes, ny milina CNC dia mety kokoa amin'ny famokarana ampahany kely - manolotra scalability sy azo averina ho an'ny fampiharana mitaky famokarana avo lenta amin'ny ampahany fandeferana.
Ho fanampin'ny fanolorana milina 2-axis tsotra izay ivezivezin'ny fitaovana ao amin'ny famaky X sy Z, ny fitaovana CNC precision dia ahitana maodely multi-axis izay ahafahan'ny workpiece mihetsika ihany koa.Mifanohitra amin'ny lathe izay voafetra amin'ny fihodinana ny workpiece ary ny fitaovana dia hifindra mba hamoronana ny géometrika irina.
Ireo fanamafisana multi-axis ireo dia mamela ny famokarana geometries sarotra kokoa amin'ny asa tokana, tsy mila asa fanampiny ataon'ny mpandraharaha milina.Tsy vitan'ny hoe manamora ny famokarana ampahany sarotra izany, fa mampihena na manafoana ny mety hisian'ny hadisoan'ny mpandraharaha.
Ho fanampin'izany, ny fampiasana coolant fanerena avo lenta miaraka amin'ny machining CNC mazava tsara dia miantoka fa tsy miditra amin'ny asa ny chips, na dia mampiasa milina misy spindle mitsangana mitsangana aza.
Ny milina fikosoham-bary samihafa dia tsy mitovy amin'ny habeny, ny fanamafisana ny axis, ny tahan'ny famahanana, ny hafainganam-pandehany, ny fitarihana ny famahanana fikosoham-bary ary ny toetra hafa.
Na izany aza, amin'ny ankapobeny, ny fikosoham-bary CNC rehetra dia mampiasa spindle mihodinkodina hanapahana fitaovana tsy ilaina.Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanapahana metaly mafy toy ny vy sy ny titane nefa azo ampiasaina amin'ny fitaovana toy ny plastika sy aliminioma.
Ny fikosoham-bary CNC dia naorina ho azo averina ary azo ampiasaina amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny prototyping ka hatramin'ny famokarana avo lenta.Ny fikosoham-bary CNC avo lenta dia matetika ampiasaina amin'ny asa fandeferana mafy toy ny fikosoham-bary maty sy lasitra.
Na dia afaka mivadika haingana aza ny fikosoham-bary CNC, ny famitana as-milled dia mamorona ampahany misy marika fitaovana hita maso.Mety hamokatra ampahany misy sisiny maranitra sy burr ihany koa izy io, noho izany dia mety ilaina ny dingana fanampiny raha toa ka tsy azo ekena ny sisiny sy ny burrs amin'ireo endri-javatra ireo.
Mazava ho azy fa ny fitaovana deburring voaprograma ao amin'ny filaharana dia hanapotika, na dia mahatratra 90% amin'ny fepetra vita amin'ny ankapobeny indrindra aza, mamela endri-javatra sasany ho an'ny famitana tanana farany.
Raha ny amin'ny finiavana ambonin'ny, misy fitaovana izay tsy hamokatra ambonin'ny azo ekena ihany, fa koa ny fitaratra-toy ny vita amin'ny ampahany amin'ny asa.
Karazana milina CNC
Ireo karazana milina fitotoana fototra roa dia fantatra amin'ny anarana hoe ivon'ny milina mitsangana sy ivon'ny milina marindrano, izay ny fahasamihafana voalohany dia eo amin'ny orientation ny spindle milina.
Ny foibe machining mitsangana dia fitotoana iray izay ampifanarahana amin'ny axe Z ny axe spindle.Ireo milina mitsangana ireo dia azo zaraina ho karazany roa:
■Mila fikosoham-bary, izay ihetsehan'ny spindle mifanandrify amin'ny axe-ny manokana raha ny latabatra kosa dia mihetsika mifanandrify amin'ny axe amin'ny spindle.
■Turret fikosoham-bary, izay ny spindle dia mijanona ary ny latabatra dia mihetsika mba ho perpendicular foana sy mirazotra amin'ny axis ny spindle mandritra ny fanapahana asa.
Ao amin'ny foibe machining marindrano, ny axis spindle ny fikosoham-bary dia mirindra amin'ny Y-axis.Ny rafitra marindrano dia midika fa ireo fikosoham-bary ireo dia mirona maka toerana bebe kokoa eo amin'ny gorodona fivarotana milina;izy ireo ihany koa amin'ny ankapobeny mavesatra ny lanjany sy mahery kokoa noho ny milina mitsangana.
Ny fikosoham-bary marindrano dia matetika ampiasaina rehefa ilaina ny famenoana tsara kokoa;Izany dia satria ny fiorenan'ny spindle dia midika fa mihemotra ho azy ireo poti-paty ary mora esorina.(Ho tombony fanampiny, manampy amin'ny fampitomboana ny fiainan'ny fitaovana ny fanesorana puce mahomby.)
Amin'ny ankapobeny, ny foibe machining mitsangana dia miparitaka kokoa satria mety ho mahery vaika toy ny foibe machining horizontaly ary mahazaka ampahany kely.Fanampin'izany, ny foibe mitsangana dia manana dian-tongotra kely kokoa noho ny foiben'ny milina marindrano.
Multi-axis CNC fikosoham-bary
Ny foibem-bary CNC precision dia misy famaky maro.Ny fikosoham-bary 3-axis dia mampiasa ny famaky X, Y, ary Z ho an'ny asa isan-karazany.Miaraka amin'ny fikosoham-bary 4-axis, ny milina dia afaka mihodina amin'ny axe mitsangana sy mitsivalana ary manetsika ny workpiece mba ahafahana machining mitohy kokoa.
Ny fikosoham-bary 5-axis dia manana famaky nentim-paharazana telo sy famaky rotary roa fanampiny, izay ahafahana mihodinkodina ny asa rehefa mivezivezy manodidina azy ny lohan'ny spindle.Izany dia mamela ny lafiny dimy amin'ny workpiece iray ho vita amin'ny milina nefa tsy manala ny workpiece sy mamerina ny milina.
Ny lathe - antsoina koa hoe ivon-toeram-pihodinana - dia manana spindle iray na maromaro, ary famaky X sy Z.Ny milina dia ampiasaina hanodinana workpiece amin'ny axis mba hanatanterahana asa fanapahana sy famolavolana isan-karazany, fampiharana fitaovana isan-karazany amin'ny workpiece.
CNC lathes, izay antsoina koa hoe live action tooling lathes, dia mety amin'ny famoronana ampahany cylindrical na spherical symmetrical.Tahaka ny milina CNC, ny lathe CNC dia afaka mitantana ny asa kely kokoa toy ny prototyping fa azo apetraka ihany koa ho an'ny famerenana avo lenta, manohana ny famokarana avo lenta.
Ny lathe CNC dia azo apetraka ihany koa ho an'ny famokarana tsy misy tanana, izay mahatonga azy ireo ho be mpampiasa amin'ny indostrian'ny fiara, elektronika, aerospace, robotika ary fitaovana fitsaboana.
Ahoana ny fiasan'ny lathe CNC
Miaraka amin'ny lathe CNC, misy baraingo misy tahiry tsy misy entana dia ampidirina ao amin'ny chuck ny spindle ny lathe.Ity chuck ity dia mitazona ny workpiece amin'ny toerany rehefa mihodina ny spindle.Rehefa tonga amin'ny hafainganam-pandeha takiana ny spindle, dia misy fitaovana fanapahana tsy misy fiatoana entina mifandray amin'ny workpiece mba hanesorana ny fitaovana ary hahatratra ny geometrika marina.
Ny lathe CNC dia afaka manao asa maromaro, toy ny fandavahana, fametahana kofehy, mankaleo, reaming, miatrika, ary mihodina.Mitaky fanovana fitaovana ny asa samihafa ary mety hampitombo ny vidiny sy ny fotoana fanamboarana.
Rehefa vita ny asa machining rehetra ilaina, dia tapaka ny ampahany amin'ny tahiry ho an'ny fanodinana bebe kokoa, raha ilaina.Ny lathe CNC dia vonona ny hamerina ny fandidiana, miaraka amin'ny kely na tsy misy fanampiny setup fotoana matetika ilaina eo anelanelany.
CNC lathes dia afaka handraisana isan-karazany automatique bar feeders, izay mampihena ny habetsaky ny tanana akora fikarakarana sy manome tombony toy izao manaraka izao:
■ Ahena ny fotoana sy ezaka takiana amin'ny mpandraharaha milina
■ Tohano ny barstock mba hampihenana ny hovitrovitra izay mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahamendrehana
■ Avelao hiasa amin'ny hafainganam-pandeha tsara indrindra ny fitaovan'ny milina
■ Ahenao ny fotoana fanovana
■ Ahena ny fako ara-nofo
Karazana lathes CNC
Misy karazana lathes isan-karazany, fa ny mahazatra indrindra dia lathes CNC 2-axis sy lathes mandeha ho azy any Shina.
Ny ankamaroan'ny CNC China lathes mampiasa spindles lehibe iray na roa miampy spindles iray na roa aoriana (na faharoa), miaraka amin'ny famindrana rotary tompon'andraikitra amin'ny voalohany.Ny spindle lehibe dia manao ny asa machining voalohany, miaraka amin'ny fanampian'ny bushing mpitari-dalana.
Fanampin'izany, ny lathes sasany amin'ny fomba Shinoa dia tonga miaraka amin'ny lohan'ny fitaovana faharoa izay miasa toy ny milina CNC.
Miaraka amin'ny lathe mandeha ho azy CNC China-style, ny fitaovana tahiry dia omena amin'ny alàlan'ny spindle sliding ho any amin'ny bushing mpitari-dalana.Izany dia ahafahan'ny fitaovana manapaka ny fitaovana manakaiky kokoa ny toerana tohana ny fitaovana, ka ny milina Shina dia mahasoa indrindra ho an'ny kojakoja mivadika lava sy manify ary ho an'ny micromachining.
Ny ivon-toeram-pihodinana CNC multi-axis sy ny lathes amin'ny fomba Shina dia afaka manatanteraka asa machining marobe amin'ny fampiasana milina iray.Izany dia mahatonga azy ireo ho safidy lafo vidy ho an'ny geometries sarotra izay raha tsy izany dia mitaky milina maro na fanovana fitaovana amin'ny fampiasana fitaovana toy ny milina CNC mahazatra.
Plate fandrefesana granita, Kodiaran'ny horonam-boky mitsivalana, Precision Granite Square Ruler, Stainless Steel Universal Joint, Precision Granite Cube, Precision Granite,